सुनको मूल्य प्र’तितोला ३ सय रुपैयाँले बढ्यो:: Mero Desh
सुनको मूल्य प्र’तितोला ३ सय रुपैयाँले बढ्यो
Published on: २ बैशाख २०७८, बिहीबार ०७:००
मंगलबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला ८९ हजा र ५ सय रुपैयाँमा कायम भएको सुनको मूल्य बिहीबार ३ सय रुपैयाँले बढेर ८९ हजार ८ सय रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । सुन को मूल्य प्र’तितोला ३ सय रुपैयाँले बढ्यो ! यस्तै हेेेर्नको
त्यसैगरी, मंगलबार तेजावी सुनको मूल्य प्र’तितोला ८९ हजार ५० रुपैयाँ कायम भएको थियो भने बिहीबार ८९ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ कायम भएको छ । साथै, मंगल बार चाँदीको मूल्य प्रतितोला १२ हजार ६० रुपैयाँ थियो भने बिहीबार ३० बढेर १२ सय ९० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
यो पनि पढ्नु होस !काठमाडौं । अक्सर मानिस आफू सफ ल बन्न चाहन्छन् । सफलताका लागि ठूलो मेहनत जरुरत पर्दछ । शास्त्रले भनेको छ- कागको जस्तो चेष्टा, बकुल्ला को जस्तो ध्यान, कुकुरको जस्तो निद्रा हुने मानिस जीवन मा सफल हुन्छ । कपियले यसलाई अध्ययनसँग पनि जोडे र हेरेका छन् ।यस्तै, दृढ इच्छाशक्ति हितको प्र’यत्न पनि सफलताको अर्को शूत्र हो भन्छन् कतिपय ।
यस्तै, कतिपय मानिसले आम मानिसले गर्ने भन्दा फरक तरिकाले त्यही काम गरेर पनि सफलताको मिठो स्वाद चाखेका छन् । व्यवसायमा सफल बन्न त अझै ठूलो मेहनत जरुरत पर्दछ ! आज हामी त्यही सफल व्यवसायीले कसरी सफल बन्न सकिन्छ भनेर दिइएका केही महत्वपूर्ण मन्त्रहरु तपाईलाई सेयर गर्न लागेका छौं ।
सपना ठूलै देख्नुहोस् यो महंगो छैन हरेक पल एउटै सपना देख्नुहोस् । फरक दिन फरक फरक सपना नदेख्नुहोस् । मैले पनि त्यही गरेको हूँ ।आफूमाथि वि’श्वास राख्नुहोस् । जस्तै अफ्ठ्यारोहरु आए पनि म त्यसलाई चिर्छु । सेयर
स्रोत र साधनको परिचालन गर्छु भन्ने दृढ संकल्प गर्नुस् । र, जबसम्म मैले त्यसको समाधान खोज्दिन तबसम्म म निदाउँदिन भनेर अद्धि बढ्नुहोस् । यसको मतलब म ब्यूँझिएरै सपना हेर्छु भन्ने हो । मैले बुझेको यही हो । र, हरेक व्यक्तिले गर्नुपर्ने पनि यही हो ।clickmandu